काठमाडौं । नेपाली नारीहरुले आज हरितालिका तीज पर्व मनाउँदैछन् । तीजमा पानीसमेत नखाई व्रत बसेर भगवान शिवको पूजा गरिन्छ ।
शिवको पूजा गर्नेहरुको काठमाडौंको पशुपतिसहित देशभरका शिवालयहरुमा बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ । तीजको व्रत बसेर शिवको पूजा गरेमा विवाहित महिलाको श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहितले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक विश्वास छ ।
सोमवार, भदौ १६, २०७६, ०६:०९:००
किन बिहान उठ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ ? सावधान ! यी ५ रोगको संकेत हुन सक्छ
तपाईंको आजको भाग्यफल र ग्रहदशा कस्तो छ ?
धोका भन्दा पनि खतरनाक पार्टनरका ६ बानी,सम्बन्ध सधैं जीवन्त राख्ने उपायहरू